अनाथालयलाई …..दिपक र दीपाश्रीले…कपडा प्रदान र एक वर्षको घरभाडा पनि तिरिदिने…! – Gorkhali Dainik
October 5, 2020 294
काठमाडौं : नेपालीको घर आँगनमा दशैं भित्रिँदैछ । बडा दशैंको टीकाको उत्तम साइत पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । बालबालिकाहरुमा उमंग देखिन थालिएको छ ।
दशैंका लागि चाहिने कपडाको माग आफ्ना बुवाआमासँग बालबालिकाहरुले राख्न थालेका छन् । तर, कयौँ बालबालिकाको आफ्नो बुवाआमालाई भन्न नसक्ने वा नपाउने अवस्थामा छन्, अर्थात विभिन्न कारणले अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरु कसैले दिएमा खान र लाउन पाउने अवस्थामा छन् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणसँगै रोकथामका लागि चालिएका कदमले अरु क्षेत्रजस्तै अनाथालयहरु जोखिममा परेका छन् । अनाथालयमा रहेका बालबालिकाहरुलाई खुवाउन र घर भाडा तिर्न पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । यही बेला नेपालीको महान चाड दशैँ संघारमा आइपुगेको छ । काठमाडौंमा दशैंको चहलपहल बढिरहेको छ ।
मानिस सामान किन्न बजारमा भीड लाग्न थालेका छन् । तर, कपन बालुवाखानीमा रहेको एक अनाथालयका बालबालिकामा कुनै चहलपहल छैन । अनाथालय चलाउने नन्दा सिंहलाई दशैँमा कसरी बालबालिकालाई खुसी बनाउने चिन्ताले सताउन थालेका छन् । तर, यही बेला उनीहरुको मुहारमा खुसी बोकेर कलाकारद्वय दिपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले पुगे ।
नन्दा सिंहसहित दृष्टिविहीनहरुले चलाएको ‘अर्न्तदृष्टि नेपाल’लाई दिपक र दीपाले दशैंका लागि कपडा, ब्लाङ्केट, खानेकुरा प्रदान गरेका छन् ।
उनीहरु कपडा र खानेकुरा बोकेर जब अनाथालय पुगे, तब त्यहाँ रहेका बालबालिकाहरुको मुहारमा खुसी छायो । दिपक र दीपाले दृष्टि विहीनहरुले चलाएको संस्थामा रहेका १३ जना बालबालिकाहरुलाई दशैंका लागि कपडा दिए । कपडा दिएको मनका आँखाले देखेका ती बालबालिकाहरुमा खुसी छाएको थियो । बालबालिकाहरुमात्रै होइन संस्था चलाइरहेका नन्दा सिंह र गीता बस्नेतलाई पनि उनीहरुले दशैंका कपडा दिए ।
साथै दशैं कपडासहित केही खानेकुरा र आठ थान ब्लाङ्केट दिपक–दीपाले हस्तान्तरण गरिरहँदा बालबालिकाहरु र नन्दा सिंह अनुुहारमा खुसी छाएको थियो । ताली बजार खुसी प्रकट गरेका थिए । दीपक–दीपा तथा दीपाका बुवा दशैं कपडासहित सहयोग गर्न आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नन्दाले स्वागत गरिरहँदा महोल स्तब्ध बनेको थियो ।
नन्दाले अनाथालय सञ्चालन गर्दा भोग्नुपरेको समस्या सुनाइरहँदा दीपा र उनका बुवाको आँखाबाट आँशु झरिरहेको थियो भने दिपक पनि शब्दविहीन बनेका थिए । लकडाउनका कारण संस्था चलाउन भइरहेको समस्या नन्दाले सुनाइन् ।
लकडाउन अघि कालीमाटीबाट तरकारी ल्याएर बेच्दै खर्च धानेको भन्दै उनले तर कोरोना कहरसँग तरकारी ल्याएर बेच्न नसक्दा आर्थिक समस्या भएको जानकारी दिइन् ।
अरु त जसोतसो चलिरहे पनि महिना बित्नेबित्तिकै घर भाडा कसरी बुझाउने भन्ने समस्याले रातभर निद्रासमेत नलाग्ने गरेको नन्दाले पीडा सुनाइरहँदा दीपाको आँखाबाट आँशु झरिरहेको थियो । तर, त्यो स्तब्ध माहोललाई खुसी बनाउँदै दीपाले भनिन्, ‘यहाँको एक वर्षको घर भाडा हामी तिरिदिन्छौं ।’
दीपाको कुरा भूइँमा खस्न नपाउँदै नन्दाले धन्यवाद दिइन् भने सँगै रहेका बालबालिकाहरुले ताली बजार खुसी प्रकट गरे । मासिक १५ हजार घरभाडा रहेको नन्दाले जानकारी दिइन् । जसअनुसार एक वर्षको घरभाडा एक लाख ८० हजार दीपाहरुले तिरिदिने जानकारी गराइन् ।
अनाथालयलाई सहयोग गरिसकेपछि उनले भनिन्, ‘क्यानडानेपाल डटकमकर्मी मिलन भाइको पहलमा हामी यहाँ आएको हौँ । सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ सोही क्रममा केही समय अघि आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेको विषयमा पनि उनले आफूले माफी मागे पनि माफी नदिएको दुःख लागेको बताइन् ।
‘बाटोमा हिँड्दा बलात्कार गरिदिन्छु’ जस्ता कमेन्टले आफूलाई खल्लो लागेको उनले बताइन् । साथै अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेकी शान्ति गुरुङले पठाएको एक लाख रुपैयाँ पनि दिपक दीपाले सो अनाथालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।**
Prevयी ४बलिउड नायिकाः जसको “डिम्पल” मा फिदा छ पूरै विश्व….!
Nextकानभित्र माकुराको जालो ….: के तपाईको कान धेरै चिलाउँछ….!